पूर्वका सुनसरी मोरङ, झापा लगायत जिल्लामा पछिल्लो समय फैलिएको डेंगीबाट ५ सयभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् । विराटनगर महानगरमा मात्र १० जनामा यसको संक्रमण भेटिएको छ । खासगरी नेपालको तराई क्षेत्रमा डेंगीको प्रकोप रहेको छ । डेंगी खासगरी एडिस एजिप्टाई जातको लामखुट्टेको पोथीले टोक्दा लाग्ने गर्...
असार २६, वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधवार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै आगामी सन् २०३० सम्ममा अमेरिकामा २५ प्रतिशतले मृगौला रोगीको संख्यामा कमी ल्याउने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकी सरकारले मृगौला प्रत्यारोपणमा नयाँ र सरल नियम ल्याउने तयारी गरेको छ । अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्...
असार २४, टोकियो । जापानमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारिका क्रममा विभिन्न समस्या सृजना हुने गरेको पाइएको छ । जापानको श्रम तथा समाजकल्याण कार्यालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा रोजगारीका लागि कार्यस्थल अपांगतामैत्री नहुनु अत्यधिक श्रम गर्ने जापानीहरूको व्यवहारका कारण उनीहरू प्रभावित हुने गर...
प्राडा. प्रमोदकुमार सर्राफ वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कजेलका मिर्गौला विभाग प्रमुख हुन् । पछिल्लो समय नेपालमा मिर्गौलाका बिरामी बढ्दै गएको पाइएको छ । मिर्गौलाका बिरामीमध्ये आधाजसोलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापका कारण यो समस्या देखिएको प्राडा. सर्राफ बताउँछन् । खानपान, जीवनशैलीमा सुधार र स्वास्थ्यसम्बन्धी सचे...
असार १९, क्यानबेरा(अष्ट्रेलिया) । अष्ट्रेलियामा धुम्रपानका कारण हुने हृदयघातले हरेक दिन १७ जनाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । अष्ट्रेलियाली नेसनल युनिभर्सीर्टी (एएनयु) ले गरेको गहिरो अध्ययनले धुम्रपानसम्वन्धी डरलाग्दो तथ्य पत्ता लगाएको समाचारमा जनाइएको छ । उनीहरुका अनुसार धुम्रपानका कारण रक्तबाहिनी...
असार १७, वासिङ्टन । परम्परागत सूर्ती सेवनको विकल्पमा प्रयोग हुने गरेको ई–चुरोट (विद्युतीय चुरोट)ले पनि स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने गरेको वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ । ई–चुरोटले खासगरी मस्तिष्कको स्नायू प्रणाली र तन्तुमा ठूलो क्षति पुग्छ । आई–साइन्स जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा बयस्क मुसामा गरिएको...
असार ६, काठमाडौं । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र र ५९ जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालहरुको प्रयासमा नेपालमा पहिलोपटक स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन भएको छ । संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक स्थापित भयो कि भएन र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरे नगरेको...
.......अनि हाँसो गुञ्जिरह्यो !
असार २, बागलुङ । प्रेक्षालय खचाखच छ । मानिसहरू पलेंटी कसेर बसेका छन् । मञ्चपट्टि रहेका छन् , योगगुरु डा. योगी विकासानन्द । योग प्रवचन र अभ्यास चलिरहेको छ । छिनछिनमा अट्टहास हाँसोले पे्रक्षालय गुञ्जिन्छ । यहाँका योगप्रेमीले पछिल्ला तीन बिहान यस्तै माहोलमा कटाए । मज्जाले हाँसे । खुसी हुन सिके । ‘खुशी...
सबैजसो मानिस आफ्नो घर तथा कोठाको सजावट मौसमअनुसार परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । गर्मीयाममा मानिस आफ्नो बेडरुममै ‘फ्रेश’ हुने चाहनासमेत गर्छन् । गर्मी मौसममा फ्रेश र रोमान्टिक हुन कोठालाई रंगीन बनाउन सकिन्छ । यसका लागि कोठामा हल्का रङको प्रयोग गरिएको छ भने गहिरो रङको पर्दा लगाउनु राम्रो हुन्छ । गर्मीमा बे...
जेठ २०, काठमाडौं । नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा आँखाका बिरामी बढ्दै गएका छन् । वि.सं. २०३० चैत २६ मा स्थापना भएको अस्पतालमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको धुलोधुँवा, वायुप्रदूषण र बढ्दो सामाजिक सञ्जालकोे प्रयोगसँगै आँखाका बिरामी बढेका हुन् । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमनबहादुर घलेले नयाँ प्रविध...